Global Voices teny Malagasy » Angola: Efa akaiky ny fifidianana andrasana mafy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Oktobra 2018 4:03 GMT 1	 · Mpanoratra Clara Onofre Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Angola, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Iray volana latsaka sisa i Angola dia hiaina ny iray amin'ireo fizarana andrasana mafy eo amin'ny tantarany. Enina ambin'ny folo taona taorian'ny fifidianana farany , hanana fahafahana indray hampiasa ny zon'izy ireo hifidy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy ny Angoley, izay hatao ny 5 ka hatramin'ny 6 septambra.
Mangina ny toe-draharaha, na dia maro aza ireo fihetseham-po eo amin'ny mponina. Milaza ireo olona manankarena kokoa fa ho any ivelany izy ireo; ny sasany mitsikitsiky ary manome antoka fa tsy hisy zavatra hitranga satria tsy mitady ady sy fijaliana intsony ny Angoley; raha mirohotra eny an-tsena kosa ny hafa mba hividy entana madinika, raha sendra misy loza na tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra, toy izay nitranga tamin'ny taona 1992 . Ho fampahatsiahivana, tamin'io fotoana io, nanohitra ny voka-pifidianana ny antoko mpanohitra lehibe indrindra UNITA  ka niteraka ady, nitarika ny fiverenan'ny ady an-trano izay nifarana folo taona taty aoriana, miaraka amin'ny fahafatesan'ny mpitarika izany antoko izany Jonas Savimbi .
Raha mikasika ny mpandraharaha vahiny monina any Angola, tsy manana fikasana hiverina any amin'ny taniny izy ireo. Matoky ny fiarahamonin'ny orinasam-barotra fa tsy misy fiovana ny zavatra rehetra aorian'ny fifidianana ary tsy ilaina ny manova asa. Nanao ity fandinihana manaraka ity momba ny toe-draharaha ao an-toerana i Jotacê Carranca :
Taorian'ny fizotry ny fifidianana voalohany, izay tena nahakivy sy nandratra saina tanteraka, vetivety dia tonga ny fifidianana parlemantera faharoa ao Angola. Raha mitovy amin'ny fanavaozana fanantenana sy fanamafisana ny demokrasia manerana ny firenena ity dingam-pifidianana ity ho an'ny maro, ny hafa kosa any amin'ny faritra ambanivohitra sy ireo any amin'ny faritany izay nijaly ny voka-dratsy mahery herisetra, mivantana sy mampalahelo tamin'ny ady taorian'ny fifidianana tamin'ny taona 1992, dia heveriko fa misy ny fahatsapana tahotra sy fisalasalana, tsy fanantenana ary tsy fahampian'ny fitokisana amin'ny tombontsoa mety aterak'ity fifidianana ity eo amin'ny fiainan'ny mponina rehetra. Ao amin'ireo faritra ireo, dia ilaina ny manao asa mavesa-danja amin'ny fanamorana ny dingana izay mihoatra lavitry ny hery ara-politika, estetika, ara-kolontsaina, ara-pinoana sy filozofika. Tsy maintsy mampiroborobo ny feon'ny fieritreretana ara-tsosialy sy isan'olona avy isika.
Efa namoaka antso ho amin'ny fitoniana sy fandaminana amin'ny androm-pifidianana ny filoham-pirenena Angoley José Eduardo dos Santos, nilaza izy fa “ilaina ny fiantohana ny fiarovana ny olom-pirenena sy ny fiarovana ny fananany, satria fepetra voalohany indrindra ny filaminam-bahoaka”. Nilaza koa izy fa ilaina ny “manaja ny fomba fijery sy ny hevitry ny hafa” tsy mila mampiasa “herisetra am-bava na ara-batana.”
Manantena izahay fa hanana tontolo milamina amin'ny fifidianana ireo mpifidy 8,3 tapitrisa ary hanao izany amin'ny fomba mazava sy mahatsiaro tena. Maherin'ny 12.000 ireo foibem-pifidianana manerana ny firenena. Mandritra izany, dia efa mavitrika amin'ny fampielezan-kevi-pifidianana tarihin'ireo antoko politika sivy i Angola. Ho fampahalalana misimisy kokoa momba ny sehatra ara-politikan'ireo antoko ara-politika ireo , tsidiho azafady ny bilaogin'i Eugénio Costa Almeida .
Nosoratana voalohany tamin'ny teny Portiogey, dikan-teny Anglisy avy amin'i Paula Góes 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/04/127158/
 Enina ambin'ny folo taona taorian'ny fifidianana farany: http://en.wikipedia.org/wiki/Angolan_legislative_election%2C_1992
 toy izay nitranga tamin'ny taona 1992: http://en.wikipedia.org/wiki/Angolan_presidential_election%2C_1992
 ady an-trano : http://en.wikipedia.org/wiki/Angolan_Civil_War
 Jonas Savimbi: http://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Savimbi
 Jotacê Carranca: http://blogdangola.blogspot.com/2008/07/anlise-s-eleies-e-eleitores.html
 antoko ara-politika ireo: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Angola
 Eugénio Costa Almeida: http://pululu.blogspot.com/2008/08/comeou-campanha.html